हास्नु स्वास्थ्यकाे लागि कति उत्तम ? थाहा पाउनुस् – आफ्नो प्रेरक संसार
हास्नु स्वास्थ्यकाे लागि कति उत्तम ? थाहा पाउनुस्
Bibas chetan — २ भाद्र २०७६, सोमबार १५:३६0comment
हाँस्नु स्वास्थ्यको लागि राम्रो हो । हाँस्नु यस्तो प्राकृतिक विधि हो, जसले हामीलाई शारीरिक रूपमा मात्रै होइन, मानसिक रूपमा समेत स्वस्थ बनाउँछ ।
खुलेर हाँस्नुका थुप्रुै फाइदा छन् । निरन्तर हाँस्दा तनावबाट मुक्त हुइन्छ । अल्छीपन हराएर जान्छ । हाँस्ने हो भने शरीरबाट क्यालोरी खर्च हुन्छ । यसले वजन नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्र्याउँछ । हाँस्दा शरीरमा रगतको प्रवाह बढ्ने गर्दछ । शरीरमा पर्याप्त अक्सिजन भएमा ब्याक्टेरिया र भाइरस नष्ट गरिदिन्छ । जसले स्वास्थ रहन मदत पुग्छ ।
खुलेर हाँस्दा मुटुमा रगत र अक्सिजनको प्रवाह राम्रो हुन्छ जसलेगर्दा मुटु स्वस्थ हुन्छ । हास्नको लागि साथीभाइसँग ठट्टा गर्ने, चुट्किला पढ्ने, फन्नी भिडियो अथवाफिल्म हेर्ने र बच्चाबच्चीसँग रमाइलो गर्ने गर्दा हास्ने बाहाना मिल्छ ।
१. हास्दा हाम्रो मुटुको एक्सरसाईज हुन्छ । रक्त-संचार राम्रोसंग हुन्छ । हास्दा शरीरबाट एण्डोफ्रीन रसायन निक्लिन्छ । यो हाम्रो मुटुलाई मजबुत बनाउछ । हास्नाले हृदयघात हुने सम्भावना कम गर्छ ।
२. एक रिसर्चको अनुसार अक्सिजनको उपस्थितिमा क्यान्सर कोषिका र कैयो अरु प्रकारको ब्याक्टेरिया तथा भाइरस नस्ट हुनेगर्छ । हास्दाखेरि हामीलाई अक्सिजन अधिकमात्रामा मिल्ने गर्छ र शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबुत हुन्छ ।
३. यदी बिहानको समय हास्य ध्यान योग गरे हाम्रो पुरै दिन प्रसन्नतामा बित्ने गर्छ । यदी यो योग राति गरेमा निन्द्रा राम्रो लाग्नेछ । हास्य योगले हाम्रो शरीरमा हारमोन्सको स्राब हुन्छ, जसले मधुमेह, ढाड दुख्ने तथा डिप्रेसन भएको व्यक्तिको लागि अति राम्रो योग हो ।
४. हास्नाले हामीलाई सकारात्मक उर्जा आउने गर्छ । हाम्रो शरीर हलुको , दिमाग ताजा र अफिसमा शरीर सक्रिय रहिरहनेछ ।
५. हरेक दिन एक घण्टा हास्नाले ४०० क्यालोरी उर्जा खपत हुन्छ, यसले हाम्रो मोटोपनमा काबु राख्छ ।